Akụkọ - Sodium Saccharin Anhydrous
Sodium saccharin, nke a makwaara dị ka soluble saccharin, bụ nnu sodium nke saccharin, ya na mmiri kristal abụọ, kristal na-enweghị ntụ ma ọ bụ obere ude ọcha, na-enwekarị mmiri kristal abụọ, ọ dị mfe ida mmiri kristal ka ọ bụrụ saccharin anhydrous, Ọ bụ ntụ ntụ ọcha, odorless ma ọ bụ ubé-esi ísì ụtọ, na ike ụtọ na ilu uto. Nesstọ dị ihe dị ka ugboro 500 na nke sucrose. Ọ nwere adịghị ike okpomọkụ na alkali iguzogide, na ụtọ uto nke nta nke nta na-apụ n'anya mgbe kpụ ọkụ n'ọnụ n'okpuru acidic ọnọdụ, na ihe ngwọta karịrị 0.026% na uto bụ ilu.
Nesstọ nke saccharin sodium bụ nke 300 ruo 500 nke nke sucrose, ọ na-agbasikwa ike na usoro nri na usoro mmepụta nri.
1. Ngwaahịa na-acha ọcha ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụ ntụ ọcha nke nwere ezigbo mmiri, nkwụsi ike na enweghị lumps.
2. Ọkachamara pụrụ iche, uto dị ọcha, enweghị isi pụrụ iche, nchekwa na nsonaazụ na-adịghị egbu egbu, ma na-esi ísì ụtọ, isi ọma, ezigbo obi ụtọ, ma nwee ike ịme mma nri.
3. Thetọ na-anọ ogologo oge, uto dị mma, ọ nwere ike nweta nsonaazụ nke saccharin enweghị ike iru, ụtọ dị elu, usoro onunu ya dị obere, ọnụ ahịa ya dịkwa elu.
1. Mee ka nri nri dịkwuo mma, mee ka echiche anụ ahụ dapụta, mee ka ọ nwee agụụ siri ike, mee ka nri rie nri, ma kwalite uto.
2. Kpuchie isi puru iche. Ngwaahịa a nwere ike ikpuchi ma ọ bụ mee ka isi ísì ọjọọ nke ụfọdụ ndepụta nri, melite ogo nri site n'echiche nke isi, wulie agụụ anụmanụ, ma mụbaa nri oriri.
3. Inye uto na-esi isi na-esi isi, na-eme ka nri a na-eri nri na-aga n'ihu, na-eme ka ekpomeekpo na nri na-eri nri ka mma, si otú ahụ na-eme ka agụụ na-agụ anụmanụ, na-amụba nri oriri, na ịgbasa ahịa nri.
4. Meziwanye arụmọrụ nke ngwaahịa nri, tinye ngwaahịa a ka ọ nye ezigbo akara maka ndepụta, melite ogo ogo ya na asọmpi ahịa, gbasaa ahịa, ma nweta uru akụ na ụba afọ ojuju.
Akwadoro ka ị gbakwunye 100 grams kwa ton na nri nri maka piglets, na-a suụ pigs, na nri zuru ezu. Enwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka ọnọdụ dị iche iche dị ka usoro nri, ụdị anụmanụ na afọ, oge, njirimara mpaghara, mmasị ahịa, wdg. Ego ole a ga-atụkwasị anya na nri na nke a ga-eme atụmatụ dịka nke a, na premix bụ ọbụlagodi mgbe ejiri ya.
1. Buru ụzọ jiri akụkụ soybean nri na ngwaahịa a ka-agwakọta ya, tinyezie ya na ngwa ọrụ ndị ọzọ dabara adaba, wee gwakọta nke ọma, abụghị nri;
2. Jiri ngwa ngwa mgbe ịmechara ngwugwu ahụ, ma ọ bụghị ya, a ga-emechi ya ma chekwaa ya;
3. Ọ bụrụ na ọdịdị nke ngwaahịa gbanwere ntakịrị, ọ gaghị emetụta ogo ngwaahịa yana mmetụta ojiji;
4. Ejila nri nri dị ala ma ọ bụ nke a kwara iko.
Ọnọdụ nchekwa na usoro
Ekwesiri imechi ngwaahịa a ma chekwaa ya na ebe di oyi ma kpoo ya na ulo, ma zere igwakota ya na ihe ojoo ojoo.
Jiri ya: A na-ejikarị ya eri nri, ihe ọveraụveraụ na-aba n'anya, ekpomeekpo na ọgwụ na-achọpụta ọrịa, yana ọtụtụ ndị na-eji ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na ihe ịchọ mma.
1. Nri nri: nri ezi, ihe uto, wdg.
2.Nri: ihe ọ drinksụ generalụ oyi, ihe ọ ,ụ ,ụ, jelii, popsicles, pickles, preserves, pastries, mkpụrụ osisi echekwara, meringues, wdg.
4. Electroplating ụlọ ọrụ: Electroplating ọkwa sodium saccharin na-bụ-eji maka electroplating nickel, nke a na-eji dị ka a na-egbuke egbuke. Tinye obere sodium saccharin nwere ike melite nchapụta na mgbanwe nke nickel electroplated.
5. Ngwakọta nri ndị a gwakọtara ugbu a bụ ngwaahịa 80-100, nke dị mfe ịgwakọta nke ọma.